Articles | Narinepal | Page 2
शिक्षितहरूबाटै विभेद !
नेपाली समाजलाई रोग, भोक, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कुरीतिले चल्नै नसक्ने गरी गाँजेको छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा सचेत र सभ्य नेपालीहरूलाई दिउँसै सपना देखाइदिएको छ । नदेखाओस् पनि कसरी ? शिक्षित र पढेलेखेकाहरूले नै श्रीमतीले छोरा नपाएको निहुँमा आˆनै श्रीमतीलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछन् । दाइजो नल्याएको झोँकमा कैयौं चेलीहरूले ज्यूँदै जलेर मर्नुपरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा नेपाली महिला
नीरा अधिकारी ‘निहारिका’
मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ भने समावेशी नयाँ नेपालको निर्माणमा सबै गोलबद्ध बनिरहेको स्थिति छ । देशको आधा हिस्सा ओगटेका नेपाली नारीहरूले पनि सो अवसरको उपयोग गर्दै आˆनो भागलाई अधिकारको रूपमा स्थापना गर्न ३३ प्रतिशत राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् । तर व्यवहारतः यो प्रतिशतले मूर्त रूप भने पाएको छैन । सहभागितालाई सङ्ख्यात्मक रूप दिने प्रयास भए पनि नीति निर्माणमा उनीहरूको विचारलाई प्राथमिकता दिइँदैन । राष्ट्रपति बन्ने क्रममा महिला असक्षम हुन्छन् भनी पन्छाइन्छ । सभामुख बनाउने क्रममा महिलाले फितलो निर्णय गर्छन् भनी अर्को तानाबाना बुनिन्छ । पार्टीका प्रमुख पदहरूमा उनीहरूलाई पुर्‍याउनु पर्नेमा पुरुषहरूबाटै अवरोध सिर्जना गरिन्छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको स्थान सुनिश्चित गरिन्न भने के लैड्ढकि समानताको यति लामो लडाइँ अब नयाँ नेपालको निर्माणसम्म आइपुग्दा पनि परम्परागत सोचाइ र व्यवहारबाट चलिरहनु पर्ने हो त ?
दाइजो विरोधी आन्दोलनको अर्को पाटो
विवाहको प्रसङ्गसँगै गाउँ-सहरमा दाइजोको होडबाजी वा चर्चा-परचिर्चा सुनिन्छ । कसले कति दियो, के-के दियो ? आफ्नो हैसियतअनुसार दियो कि दिएन ? दाइजोको निहुँमा नववधूहरूले शारीरकि तथा मानसिक यातना भोग्न बाध्य भएका अनि अङ्ग-भङ्ग गर्ने, मार्ने र स्वयं मर्ने प्रयास गरेका थुपै्र घटना प्रकाशमा आइरहन्छन् । केही वर्ष पहिले यसैको निहुँमा हासरुन इदि्रसी नामक नववधूलाई परीवारका सदस्यले मार्न खोजेको खबरले ठूलै चर्चा पाएको थियो ।
दाइजो प्रथाका कारण र परिणाम
सञ्जय कुमार दास
दाइजो अर्थात् स्थानीय भाषामा दहेज धनुषाका महिलाका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । त्यस क्षेत्रमा वैवाहिक सम्बन्ध राख्न दहेज अनिवार्य बनेको छ । धनुषाका कन्याका लागि राम्रो दुलाहा पाउन सुन्दरी हुनुका अतिरिक्त धेरै मात्रामा दाइजो चाहिन्छ । माइती पक्षले सहजरूपमा नगद अथवा विभिन्न सामग्री दाइजो दिन नसके ऋण गरेर अथवा घरजग्गा-सम्पत्ति धितो राखेर पनि केटा पक्षले भनेजति दहेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै अभिभावक आˆना छोरीहरूलाई धेरै दाइजो तिर्दा तिर्दा कंगाल नै बनेका छन् । कन्याका अभिभावकले सासुससुराको धेरै दहेजको लालचालाई पूरा गर्नसकेनन् भने उनीहरूले धेरै शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त ज्यानै त्याग्नुपर्ने स्थिति पनि निम्त्याएको देखिन्छ । यसबाहेक मागेजति दाइजो तिर्न नसके विवाह नै टुट्नसक्छ । एकपटक विहेको प्रस्ताव टुटेमा केटालाई त केही फरक पर्दैन, तर केटीलाई उपयुक्त केटासँग फेरि विवाह गर्न कठिन हुन्छ ।
नयाँ संविधानमा महिला अधिकार
पुरुषप्रधान समाजमा महिलाको भूमिका गौण ठानिँदै आएको छ त्यसैले समाजका हरेक तहतप्कामा पुरुषकै तुलनामा अत्यन्तै कम महिला उपस्थिति देखिन्छ । परापूर्वकालदेखि राज्यसत्तामा पुरुषको मात्र पहुँच रहनु यसको जड हो । यहाँसम्म कि धार्मिक कथा, कहानी, पुराण, ग्रन्थ, इतिहास तथा साहित्यमा पनि महिलाको चित्रण नगण्य पात्रको रूपमा पाइन्छ । समाजका जुनसुकै निकायमा महिलाको सहभागिता कम हुन्छ । महिलाहरू निष्त्रिmय प्रायः हुन्छन् । उनीहरूलाई घरायसी कामहरू र चुल्हो चौकोको ठेक्का दिइन्छ । घरपरिवार चलाउन निणर्ायक ठानिने कामको जिम्मा पुरुषले लिन्छ र नेतृत्व पनि उसैले गर्छ । आउने अवसरमा पनि पुरुष आफैं अगाडि बढ्छ र आफूलाई सक्षम र सबल पार्छ । तर आˆनो घरकी आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती, फुपू, काकी पनि सचेत बन्नुपर्छ उनीहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने सवालमा कहिल्यै सोच्दैन किनभने उसलाई त्यही संस्कार र संस्कृति प्यारो छ जसमा ऊ आफू सर्वेसर्वा भएर आएको छ ।
महिला विकासका पूर्वाधार
सविता अर्याल ‘प्रकृति’
आजका नारीहरूमा आकाश जमिनको फरक आएको पाइन्छ । शिक्षा, चेतना र जागरणलगायतका दृष्टिकोणबाट आजका महिला धेरै अघिबढेका छन् । विगतको तुलनामा एकसरोृ फरिया र चोलोको भरमा वर्षदिन बिताउने नारी आज सुट र पाइन्टमा सजिएर कार चलाएर अफिस जाने भएका छन् । यो जमाना र युगले ल्याएको परिवर्तन हो तर महिलाहरू जति विकसित देखिए पनि यो यथार्थमा हुनसकेको छैन ।
सहअस्तित्वको भावनाबाटै महिला उत्थान
एउटा उखान छ “लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो” भनाइको तात्पर्य परालको आगो एकैछिनमा भासभुस गरेर निभेजस्तै लोग्नेस्वास्नीको झगडा पनि एकैछिनमा सामसुम हुन्छ । पहिलेकै जस्तै पुनः दुईको बीचमा मेलमिलाप हुन्छ भन्ने सन्दर्भसँगै जोडिएको यथार्थलाई त्यहाँ प्रष्ट्याउन खोजिएको छ । हिजोको अवस्थामा पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताको आधारमा महिलालाई सहनशील, धैर्यशील, गुणवती र शान्तिको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो जसको फलस्वरूप परिवारभित्र महिलाले जस्तोसुकै क्रूर यातना भोग्न परे पनि सहन बाध्य थिए । त्यति मात्रै होइन महिलालाई दासी र खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्दा र शारीरिक र मानसिक यातना दिएर तेस्रो व्यक्तिले केही भन्न नपाउने संरचना तयार पारिएकाले उनीहरूले आँखाबाट बग्ने पीडारूपी आँसुलाई महादेवले हलाहल विष पिए जस्तै चुपचाप पिएर आˆना व्यथा र उत्पीडनलाई दबाउने प्रयास गर्दै जिउन बाध्य छन् । महिलाले अन्यायविरुद्धको आवाजलाई पोथी बासेको सङ्ज्ञा दिनु पनि पारिवारिक संरचनाभित्रको एउटा आधारविहीन र महिलालाई तह लगाउने कडीको रूपमा लिएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।